Madaxweynaha maamulka koonfurgalbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa waxaa soo wajahey culeys siyaasadeed oo uga imaanaya baarlamaanka maamulkaas. Mudooyinkii lasoo dhaafey waxaa jirtey xildhibaano tiradoodu gaareysa 50- tameeyo ayaa wadey mooshin ka dhan ah madaxweynaha...
Wakaalada wararka ANATOLIA ayaa sheeggtey in dowlada turkiga ay usoo dirtey dowlada federaalka soomaaliya 450 xabo oo qoriyaha casriga ah kuwaas oo loo yaqaano mpt-76 oo lagu farsameeyey gudaha dalka turkiga. Qoriga oo muuqaal ahaan u eg qoriga m-16 ayaa lasheegey inuu wax kadilo...
Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xildhibaan hore u magacaabey gudoomiye ku xigeenka degmada c/asiis. Gudoomiye taabit cabdi ayaa bilaabey inuu isbadel ku sameeyo gudoomiye ku xigeenada degmooyinka gobolka banaadir xili xaalada amni ee magaalada sii...
Ciidamada amisom ayaa faarujiyey degaan hoosiyaamada degmada baraawe ee gobolka shabeelaha hoose. Ciidamada ka ka baxey deegaanka rasadaay oo ku dhow degmada baraawe ayaa lasheegey iney u ruqaansadeen dhinaca buulo mareer iyadoo durbadiiba al-shabaab ay la wareegeen gacan ku...
Shirkii Madaxda Dowlada Federaalka Iyo Maamul Goboleedyada Oo Maalintii Labaad Galey.
Shir wadatashi ah ayaa kasocda magaalada muqdisho kaasoo u dhaxeeya madaxda dowlada federaalka soomaaliya iyo golaha iskaashiga dowlada goboleedyada. Shirkan oo villa soomaaliya kasocda maalintii labaad ayaa looga hadleya siyaada dalka, amniga, dib u eegista dastuurka,...
Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane Taabit Abdi ayaa sheegey in gawaarada xamuulka aysan socokarin laga bilaabo 7-subaxnimo ilaa iyo 8-da fiidnimo. Gawaaridan ayaa waxey yihiin booyadaha shidaalka iyo gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada. Gudoomiyaha...